Al-shabaab oo sheegtay inay kordhinayan weerarrada masiixiyiinta Kenya | Berberanews.com
Home WARARKA Al-shabaab oo sheegtay inay kordhinayan weerarrada masiixiyiinta Kenya
Al-shabaab oo sheegtay inay kordhinayan weerarrada masiixiyiinta Kenya
Sida laga soo xigtay hay’ad u ololeeysa arrimaha dadka Christianka oo fadhigeedu yahay Maraykanka. Kooxda al-Shabaab ayaa ku amartay dadka Masiixiyiinta inay ka baxaan saddex degmo oo kuyaala gobolka waqooyi-bari Kenya, si loogu oggolaado Muslimiinta maxalliga ah inay helaan dhammaan shaqooyinka.
“Macallimiinta Muslimka ah, dhakhaatiirta, injineerada, iyo dhalinyarada ka qalin-jabisay gobolka waqooyi-bari waa shaqo la’aan. Miyaanay fiicnayn in la siiyo fursad? Looma baahna jiritaanka gaalada, ”afhayeenka al-Shabaab, Sheekh Cali dheere, ayaa sidaas ku sheegay cajal maqal ah oo la soo dhigay internetka.
cajal maqalka oo socday 20 daqiiqo ayuu afhayeenka alshabab ku booriyay Soomaalida-Keenyaanka ah inay iska saaraan dhammaan dadka aan Muslimka aheyn haddii aysan kaligood iska bixin.
Inta badan dadka ku nool saddexda degmo waa Soomaali, kuwaas oo kasoo jeeda gobolkaas waqooyi Bari.
Bishii Jannaayo, saddex macallin oo Masiixiyiin ah ayaa lagu diley magaalada Kamuthe ee Gobolka Gaarisa intii lagu jiray weerar lagu qaaday dugsi hoose, weerarkaas oo la rumeysan yahay in ay fuliyeen al-Shabaab.
Sidaas darteed, macallimiin badan oo aan maxalli ahayn ayaa durba loo wareejiyay dugsiyo kale oo ka baxsan woqooyi-bari Kenya, ama macallimiinta laftooda ayaa codsanayay beddelaad.
Nathan Johnson, oo ah maamulaha maxkamada ICC ee Africa ayaa yiri “sii deyntani warkaan waa war xun. Dadka masiixiyiinta waxay durba la noolyihiin cabsi iyo welwel, maadaama qaar badani ay u safreen si ay shaqo u helaan. Iyada oo ay jirto khatartan, waxaa iska cad in al-Shabaab ay sii kordhin doonto weerarada ay ku hayaan Masiixiyiinta.”
Kenya waxay ku jirtaa kaalinta 44-aad marka laga hadlayo cadaadisyada Masiixiyiinta, sida lagu xusay Liis s
Previous article“Dilkaa dhacay mooyee wax kale ma jiraan” Taliyaha Booliska Laascaanood
Next articleTahriibayaasha dhibaatadu kasoo gaadhay xadka Giriiga iyo Turkiga u dhexeeya